Network kabinet - China Chao YU Machinery
Open ụba racks
Wall Ugwu Barcket
Network kabinet, nke a na-eji ikpokọta arịọnụ panel, nkwụnye na, nkwụnye na igbe ahụ, electronic akụrụngwa, na ngwaọrụ na n'ibu akụkụ na mmiri, ka ha wee na nwụnye igbe. Dị ka nke ugbu a ụdị, server kabinet, mgbidi kabinet, netwọk kabinet, ọkọlọtọ kabinet, ọgụgụ isi ụzọ ụdị n'èzí kabinet na na. Ike ụkpụrụ bụ n'etiti 42U na 2U.
Simple Ọdịdị, adaba arụ ọrụ, na-atọ kwee efọd ahụ, kpọmkwem size, echekwa na ihe;
- mba na-ewu ewu na-acha ọcha n'obi iko n'ihu ọnụ ụzọ;
The elu etiti na okirikiri ventilashion oghere;
N'otu oge ahụ, wụnye wheel ma na-akwado ụkwụ;
Na e nwere ike disassembled conveniently gburugburu ụzọ ma n'azụ ọnụ ụzọ ahụ;
- mezue nhọrọ ngwa.
The netwọk kabinet emi esịnede eku na cover (ụzọ), nke na-adịkarị nwere a akụkụ anọ udi, na-etinye na n'ala. Ọ na-enye ndị kwesịrị ekwesị na gburugburu ebe obibi na nche n'ihi na nkịtị ọrụ nke kọmputa akụrụngwa. Nke a bụ nanị mgbe usoro larịị mgbakọ. The kabinet nke na-enweghị a mechiri emechi Ọdịdị a na-akpọ a etiti.
Production na mmepe
Early network kabinet ukwuu n'ime site mgbatị ma ọ bụ n'akuku site ịghasa, Rivet ejikọrọ ma ọ bụ welded n'ime etiti nke kabinet, na e mere nke mkpa ígwè efere cover (ụzọ) na. Nke a na ụdị kabinet bụ nnukwu, keukwu, dị mfe, e wepụwo. Na ojiji nke transistors, integrated na sekit na sekit dị iche iche mmiri, ngwaọrụ nke ultra kọmpat, Ọdịdị nke ahụ kabinet bụkwa obere, ewu nkanka nke ntụziaka nke development. The netwọk kabinet e mepụtara n'ime a usoro nke plọg na anya na a na-size. Fanye igbe, ikwunye-na nzukọ ndokwa nke kwụ na vetikal ndokwa nke abụọ ige. The netwọk kabinet ihe n'ozuzu na-eji mkpa ígwè efere, onye ọ bụla ụdị ngalaba udi ígwè ngalaba, na aluminum profaịlụ dị iche iche engineering plastik, etc .. Na
Post oge: Jan-17-2018
NO.268 Danyang Road, Xiangshan Economic Development Mpaghara, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Kpọọ anyị ugbu a: +86 0574 65003787